Muujinta khariidada dwg / dgn - Geofumed
Maarso, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Cartografia, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
Waxaan dooneynaa inaan u adeegno layligan si aan u sharaxno qaar ka mid ah shaki ku saabsan habka ku saabsan sida loo qoondeynayo khariidada CAD.
Waxaan isticmaali doonnaa tusaalaha horey loo dhisay, kaas oo aan abuuro mashinka UTM ee xadka waqooyiga 16 ee ka sameysan xaashida sare iyo dhisida AutoCAD.
Tani waa dhibaatada ugu weyn markaad la shaqaynayso qalab caadi ah CAD. Marka laga hadlayo AutoCAD, cutubyada shaqadu waa kuwo adag oo lagu maareyn karo dadka miyirka ah, maxaa yeelay marka la rakibo markii ugu horeysay oo la dilo, waxay waydiisataa: Ma waxaad tahay roogo? Waa hagaag, ma aha cayriin laakiin weydii haddii aad isticmaali doonto unugyada millimitirka ama inches.
Ujeedadu waxay tahay in dalalka Hispanic unit waa mitir, laga yaabaa in aan si noqdaan dunida adag ujeeddo ah qorshaha dhismaha aan la taaban karo (unugyada waa halbeeg) ... la tiimbashada qaar ka mid ah marka loading blocks ama Hababka line baahan rescaling. Oo in kastoo qoraalkii ugu dambeeyey ee AutoCAD caawiyo dhibaatadan, files la dhigtay qoraalkii hore sii dhibaatada cutubyo ee marka aad rabto in aad georeference.
Dhanka Microstation-ka, waxaa lagu habeeyay «unugyada shaqadaLaakiin waxay sii ahaanayaan faylasha cad ee aan lahayn juquraafi ahaan. Waxaad si fiican ugu maamuli kartaa waxa Microstation-ga u aqoonsado fayl abuur (faylka abuurka), Xaggee dhammaan kuwa gaadmada ah ku qeexan yihiin ... in inkastoo mid ka mid fahmi kara caawimo badan si ay u bilaabaan arrimo AutoCAD u-Anglo Saxon ah.
Xusuusnow haddii aad la shaqeyneyso isku-duwaha UTM, khariidaduna '' georeferenced '' u leedahay mid ka mid ah isku-duwayaashaas, waxaad haysataa waa fayl iyadoo la tixraacayo grid, laakiin weli ma leh saadaalin ama Datum taasoo ah waxa ay tahay loo yaqaan juqraafi ahaan ama tixraac buuxda.
Xaalkeyga, "maaha inaan ku murmo" qaybaha AutoCAD, waxa aan sameeyo waa furitaanka khariidad dalkeyga ku taal Microstation, oo aan ogahay in juqraafi ahaan loo haysto, waxaan ugu yeerayaa AutoCAD faylka tixraac (maxaa yeelay uma baahna soo dejin) badhanka Ikhtiyaaraadka DWG » halkaasoo aan sheegayo in unugyada shaqadu yihiin «Unugyada sayidadka feyl feerka», gaar ahaanna Habka lifaaqa » ha ahaado «Adduunku Shikaysan». Taasi waa arrin, ma ahan haddii dwgku ka shaqeynayey millimitir ama inches, feylku wuxuu aqoonsanayaa unugyada shaqada ee khariidadeyda, ka dibna waxaan u guuriyaa khariidada tixraaca feylkeyga oo aan ku hayno magac kale, sida aan ogaado Khariidadu waxay leedahay dabeecada feylkayga.
... okay, waa dhibkeyga laakiin waa shaqeeyaa ... waxaad ka heli kartaa qallafsanaantaada
2 Kala sooc ujeedo
Kuwa soo socda waa sahlan, waxaad ku sameyn kartaa wax badan kala cayncayn ah, inkastoo haddii aad haysatid warqad xajmigaaga ah oo qiimaheedu yahay $ 1,500 waxaad sidoo kale sameyn kartaa ArcGIS :), sida uu sameeyo Map3D, Microstation Juquraafi, Cadcorpâ € |
Si aad ugu sameyso Manifold waxaad abuureysaa fayl cusub, ka dibna soo dejiso faylka CAD «fayl / soo dejin / sawir«, Adiga ayaa dooranaya faylka xulashada« dgn ». Waxay ku weydiisaneysaa ikhtiyaar u leh qaybaha qalooca, oo aad u aqbasho qiimaha ku yimaado qaab ahaan.
Markaas faylka dibedda laga keenay, waxaan tirtirayaa dhibic iyo laba khad oo aan garanaynin sababta loo abuuray. Taas awgeed waxaad kaliya sameyneysaa «taabashada iyo tirtir«… Waad ciyaartaa ka dibna tirtireysaa furaha« tirtirka »🙂
Si aad u xilsaarto saadaalinta, xulo qeybta, batoonka midigta oo dooro «ku wareejinta qiyaasta»
Xusuusnow inaadan dooran karin "beddelaadda saadaalinta" sababta oo ah waa fayl cad, oo aan soo saarin.
Xaaladdayda waxaan dooran doonaa «Universal Traverso Mercator», Aagga 16 Waqooyiga Hemisphere iyo WGS84 sida Datum.
3 Ku dhoofi Google Earth.
Tani waa hab wanaagsan oo lagu xaqiijiyo in khariidadu si fiican juquraafi ahaan u wanaagsantahay, sidaa darteed waxaan u dhoofin doonaa kml (maahan lagama maarmaan in lagu meeleeyo isuduwaha juquraafi). Midig ku dhaji qeybta horey loo qabsaday oo dooro ikhtiyaarka “dhoofinta”, adigoo dooranaya qaabka kml.
In la abuuro meelo kala duwan, waxa keliya ee aad samayn nuqul ka qayb (iyaga oo aan xataa georeference), ka dibna paste, Jinka, Jinka, Jinka, Jinka, Jinka, Jinka, Jinka ... ka dibna aad ku wareejiso meelo kala duwan si ay qayb kasta abuuray. (Qeybta Manifold waxay u dhigantaa lakabka)
Markaas waxaad fureysaa faylasha kml ee Google Earth, waxaad bedeshaa dhumucda iyo midabka laynka ... iyo waxaa jira aagagga Mexico ka soo jeeda Venezuela iyo kuwa Spain.
Laga soo bilaabo halkan waxaad soo dejisan kartaa faylasha layligan qaababka.Dwg,.Dgn V7 ,.map of manifold iyo.KML oo leh aagagga wadajirka ee waqooyiga dhexe ee dalalka Hispanic, oo ay ku jiraan saddexda oo khuseeya Spain
... dhammaantood laga soo qaato faylka dwg fudud la dhisay Excel.
Post Previous«Previous Halka laga helo khariidadaha Honduras
Post Next Ha sameynin CAD sida barnaamijyada GIS ay sameeyaanNext »
3 Jawaab in "Georeferencing dwg / dgn map"
capitan_hot isagu wuxuu leeyahay:
Gacaliye ku saabsan mawduuca, waxaan qabaa shaki iyo dhibaato si loo xalliyo.
Ma q leeyihiin file billabo CAD ah, taas oo ah gobolka waqooyi ee Ecuador, ayaa sheegay in parce mapita noqon aagga 18N Wgs84 la cadeeyo wadataa dhibcaha qaar laga qaado on Google Earth, map of course Grafting waa in meelaha 17 iyo 18 iyo waqooyiga iyo koonfurta Ameerika, ay jirto wax dhibaato aan ku leeyahay meel xogta (geesoolayaasha) iyo format qaab la qiyaas juqraafi Wgs84 oo i tuso wax walba si sax ah barnaamijyada isticmaala qiyaas, laakiin markii dhoofiyo billabo ii boot this ka fog isagoo in markuu dib u eegayo ku wadataa hore ee aagga 18 UTM woqooyi geeska sare jeeda ee u Safra waqooyiga i kabaha iyo wadataa ma yihiin Mimas iyo imtixaannay Saadaasha kala duwan laakiin midkoodna igu siinaysaa laakiin carabka ku adkeeyay sida wadataa gacanta waxaan dib u eegay barnaamijyo dhowr q muujinaysaa diyaaradda waxaa lagu qiyaasay aaga waqooyi autocad 18 wgs84.
taas oo noqon karta waxa aanan ku xisaabtamin ama sida aan ula dhaqmayo macluumaadka kiisaskaas.
u mahadcelinta hore ee jawaabta.
Waad saxan tahay, durba waan saxay dhibaatada. Hubi haddii aad kala soo bixi karto iyaga
PacoPa isagu wuxuu leeyahay:
Marka aad riixdo xiriirinta, shaashadda CPan waxay u muuqaneysaa inay ku qorayso magaca iyo lambarka iyo faylasha aan la soo dejin ...